‘बाहिरवाट काठमाडौं भित्रने सबैजनालाई आजैदेखी एस्ता नियम लागु हुने सरकारको घोषणा !! [सुचनासहित] – Khabar PatrikaNp
‘बाहिरवाट काठमाडौं भित्रने सबैजनालाई आजैदेखी एस्ता नियम लागु हुने सरकारको घोषणा !! [सुचनासहित]
मन्त्रालको पछिल्लो आँकडाअनुसार देशभरको कोरोना संक्रमितको आँकडा उकालो लागेकाले थप फैलन नदिन सचेतना अपनाउनुपर्ने भएको छ । हाल अझै ५ हजार ६७२ सक्रिय संक्रमित छन् । लकडाउनको बेलाभन्दा कोरोनाको दर घटेको थियो तर अहिले दिनहुँ कोरोना उकालो लाग्ने क्रममा छ ।
लकडाउन खुलेको पछिल्लो ११ दिनमा नै यो दर ह्वात्तै बढेको हो । त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अब काठमाडौ भित्रने सबै क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने जनाएको छ । काठमाडौं लगायत तराईका जिल्लाहरुमा संक्रमित बढेका छन् ।
संक्रमित बढेसँगै क्षेत्रगत रुपमा लकडाउन गरिएको छ । लक्षण भएका बिरामीहरु बढ्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको उपचार, नियन्त्रण र भावि योजनाका विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा।जागेश्वर गौतमले अब काठमाडौं भित्रने क्वोरन्टिनमा बस्नुपर्ने जनाएका छन् ।
लकडाउन खुलेसंगै बाहिर निस्कदा माक्स नलगाउने, भिडभाड गर्ने परिपाटीले गर्दा भाइरस फैलिएको उनको अनुमान छ । उपत्यका बाहिरबाट आउनेहरुलाई पनि कोरोना देखिएको छ । नाकामा स्वाब दिएर उनीहरु विना सावधानी भीडमा जाँदा जोखिम बढेको उनको भनाई छ। \_
कोरोना पुष्टि भएपछि कहाँ हुनुहुन्छ भनेर फोन गर्दा गलत ठेगाना दिने गरोके उनको भनाई छ । नागरिक स्वंयम् सचेत भएनन् भने स्थिति भयावह हुन्छ र अस्पतालका बेड खाली हुँदैनन् उनले भने । संक्रमित बढेसँगै क्षेत्रगत रुपमा लकडाउन गरिएको छ । लक्षण भएका बिरामीहरु बढ्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको उपचार, नियन्त्रण र भावि योजनाका विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा।जागेश्वर गौतमले अब काठमाडौं भित्रने क्वोरन्टिनमा बस्नुपर्ने जनाएका छन्
कोरोना रोकथामका लागि भावि योजनाका बारेमा चिकित्कस गौतमले भने, अब काठमाडौं भित्रने मुख्य तीन नाकाबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने मापदण्ड अन्तिम चरणमा छ । हाललाई काठमाडौं आउनेको स्वाब संकलन सकियो । स्वाब संकलन नगरेपनि मापदण्ड जारी भएपछि बाहिरबाट आएकाहरु १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ ।
यस्तै सिमानामा नै क्वारेन्टिन बनाएर पालिका वा प्रदेशले १४ दिन अनिबार्य राख्नु पर्छ । नागरिक स्वंयम् सचेत भएनन् भने स्थिति भयावह हुन्छ र अस्पतालका बेड खाली हुँदैनन्पी सीआर गरेर मात्र घरमा पठाउनु पर्छ । प्लेनमा आउनेलाइ पनि ६ दिन पछि स्वाब जाँच गरेर नेगेटिभ आएमा घरमै राख्नु पर्छ । अहिले भारतबाट दैनिक ८ सय जति मानिस आइरहेका छन् । उनीहरुलाई सिमामा नै क्वारेन्टिनमा राखिरहेका छौ
Prevसाढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनीलाई जिम्मा दिनुहोस”!
Next, नेपालमा आज कोरोना भाइरस,बाट, थप, ६ जनाको, मृत्यु,!
काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनी कोरोना सङ्क्रमण
पूर्वराजकुमारी प्रेरणालाई विजया बासबाट बलपूर्वक निष्कासन गर्न रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले आदेश